Iwo mazwi muApple Music nziyo anosvika kune dzimwe nyika | Ndinobva mac
Sezvaungangove uchitoziva, imwe nguva yapfuura, kunyanya neIOS 10, kubva kuApple vakazivisa shanduko izere pane yavo yekumhanyisa mimhanzi chikuva, inozivikanwa seApple Music, nekuda kwekuti mazwi enziyo zhinji pasi rese akasanganisirwa.
Izvi hapana mubvunzo zvinonyanya kufadza, nekuti kune rumwe rutivi kune mukana wekuona zvinotaurwa nenziyo chero nguva, uye inotovhura mikana yakawanda sezvo zvichikwanisika kutsvaga zvakananga nekupinda chikamu chemavara erwiyo. yerwiyo .rumwe rwiyo, chimwe chinhu chinobatsirawo pane dzimwe nguva, uye icho ikozvino inowanikwa kune dzimwe nyika.
Rwiyo rwemhanzi mukati meApple Music inosvika kune dzimwe nyika
Mune ino kesi, sekufunda kwatakaita ku MacRumors, zvinoita sekunge kunyangwe chiri chokwadi kuti munyika zhinji yanga ichiwanikwa zvishoma, izvozvi iri basa rekuona mazwi enziyo uye kutsvaga mimhanzi nenziyo dzavainadzo zvasvika zvachose munyika nyowaniZvinotaridza kuti Apple yakagadzirisa mapeji mazhinji mukati meApple Music rutsigiro kusanganisira irwo runyorwa nyowani.
Uye zviri izvo, sezviri pachena, kusvikira zvino zvaingowanikwa chete zvizere muUnited States, Canada, United Kingdom neAustralia, runyorwa ikozvino isu tinofanirwa kusanganisira Germany, Ireland, South Africa, New Zealand, Mexico, Spain neFrance.
Nenzira iyi, kana uchigara mune chero nyika idzi neApple Music kunyoreswa uye iine iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, Android kana chero chimwe chinhu chine iTunes chakaiswa, iwe unofanirwa kuve nenziyo zhinji mabasa maviri aripo, nekuti kune rimwe divi (kazhinji nekutsvedza pasi) unenge uine mazwi enziyo, uye kune rimwe divi kana uchitsvaga uchakwanisa kuisa chikamu chemazwi uye chinofanirawo kuonekwa pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Rwiyo rwemhanzi paApple Music rwunowedzera kuenda kune dzimwe nyika
Unganidza mana ekuratidzira kune yako MacBook Pro neichi chinowanikwa kubva kuTargus